Kamera Vatan'ny polisy izay niandry ny hisehoana endrika tarehy | Vahaolana OMG
Kamera Vatan'ny polisy dia niandrandra ny fampahafantarana tarehy
Ny rindrambaiko fankatoavana tarehy dia fitaovana ampiasaina hanitarana tarehy iray hita amin'ny tranokalan'ny mombamomba ny tarehy mba hahazoana lalao ary koa hahitana antsipiriany bebe kokoa momba ny olona ahiahiana. Rehefa mampiasa fakantsary fijerena vatana sy famerenana dia miatrika ilay horonantsary dia zava-dehibe ny ahitanao tarehy ary hahazo ny antsipirihany hahalala bebe kokoa momba azy ireo raha mandinika ny firaketana heloka bevava sy ny mombamomba azy koa izy ireo. Any Etazonia dia ny mpivarotra fakan-tsary lehibe indrindra an'ny firenena amin'ireo masoivoho mpampihatra lalàna no nahatonga ny birao orinasa iray natokana ho amin'ny fanitarana ny hakingan-tsaina amin'ny artifiana (AI). Ity dia dingana lehibe natao tamin'ny nitondrana ny teknolojia fankatoavana ny endrika mampiady hevitra amin'ny famoahana ny herin'ny polisy manerantany. Ny orinasa toa an'i Axon, mpamorona ny fitaovam-piadiana Taser ary fakan-tsary ampiasain'ny polisy eran-tany dia naneho ny fahafantarany ny hidirana sy hampidirana ireo rindrambaiko fankatoavana ny tarehy ho an'ny teknolojia ampiasain'izy ireo. Ireo teknôlôjia ireo dia ahafahan'ny manamboninahitra mandeha miambina ary hahafantatra ny tavan'izay hitan'izy ireo ary mety miahiahy raha mandeha miambina azy. Betsaka ny orinasa teknolojia vaovao mitombo izay manam-pahaizana manokana amin'ny teknolojia fanaraha-maso dia mihazakazaka ankehitriny hampifanaraka ny fahazoana ny tarehy ary ny fahaiza-manao AI marobe amin'ny rakitsary horonantsary tena izy.
Fotoana fohy taorian'ny nananganana ny birao ho amin'ny fankatoavana endrika tarehy dia vondrona iray misy zon'ny 20 sivily, teknolojia ary vondrona tsiambaratelo no nandefa taratasy miresaka momba ny olana lehibe miaraka amin'ny torolàlana ankehitriny ny orinasa Axion sy ny birao vao napetraka. Ny taratasy nalefa, dia nitaky fandraràna avy hatrany noho ny rafitra fankatoavana ny tarehy izay miasa. Nilaza izy ireo fa tsy mety loatra ny fampielezana, noho ny fisian'ny rindrambaiko dia misy fiantraikany manokana amin'ny tsiambaratelo, tsy fahalavorariana ara-teknika ary mety misy antonta mety hanimba ny fiainana miaraka aminy. Izy io dia nahita fikarohana vao haingana fa ny rindrambaiko fankatoavana ny tarehy dia tsy dia marina loatra rehefa miditra amin'ny olona manana hoditra maizina. Ity dia nanokatra ny faritra mampidi-doza izay ahafahan'i AI manondro sivily tsy manan-tsiny ary mety hiteraka fitarainana lehibe tokoa izany. Ny mpanorina ny Axion kosa dia namaly tamin'ny vahoaka fa tsy mbola mamolavola rafitra fankatoavana ny orinasa fa ny orinasa dia mazoto mandinika izany amin'ny vokatra ho avy sy ny fanavaozana. Niaiky izy fa mety tsy lavorary ny rafitra ary mety ho diso tafahoatra ary manana ny antonony amin'ny famantarana azy, na izany aza ny tombontsoa maro entiny dia tsy azo hodinihina tanteraka satria izy ireo dia lafin-javatra mety hanararaotra amin'ny ho avy.
Ny lehiben'ny Axion dia naneho ny heviny fa tsy tsapany fa vahaolana tsara ny fisian'ny tarehy, fa ny tontolo iainantsika ankehitriny dia tena mandroso ary tsy afaka mametraka andraikitra mavesatra amin'ireo manamboninahitry ny polisy izahay mba hisamborana ireo mpanao heloka bevava kisendrasendra hamantatra ireo tarehy. Miandry ny polisy hahatsiaro ny tarehin'izy ireo izay tadiaviny fotsiny dia tsy mipetraka tsara. Nino izy fa tsy mahomby ary tena tsy tokony hanana io teknolojia vaovao arahin'izy ireo io. Mbola nametram-panontaniana ihany koa izy hoe maninona ireo polisy ao amin'ny 2020 dia tokony hampiasa fitaovana avy amin'ny 1990 mandritra ny fanatanterahana ny andraikiny, ary milaza izy fa ny tontolo dia nisafidy ny tsy handroso na hitombo. Niroso tamin'ny fivoriana voalohany ny orinasa, nanasa ny orinasa 8 nisafidy manam-pahaizana amin'ny AI, ny fahalalahana sivily ary ny fahamarinana amin'ny heloka bevava. Mpikambana an-tsitrapo izay karama fotsiny ireo mpikambana ao amin'ny birao ary tsy misy hery hanova betsaka. Nangatahina izy ireo mba hanoro hevitra ny orinasa momba ny fahaiza-manao ho avy amin'ny rafitry ny fanekena ny tarehy, ary manondro ihany koa ny fomba ahafahany manampy amin'ny fahombiazan'ny polisy sy ny fahombiazana bebe kokoa. Ny fankatoavana tarehy dia efa ela no notadiavin'ny fampiharana ny lalàna sy ny fanaraha-maso ny governemanta ho tombontsoa be dia be, ary ny fihenan'ny vidin'ny fakantsary miaraka amin'ny fandrosoana lehibe amin'ny fampandrosoana AI dia vao maika manome soso-kevitra. Ny mpivoatra amin'ity sehatra ity dia efa nanoro hevitra elaela teo nandritra ny fotoana nangatahana azy ho ampiasaina amin'ny sehatry ny sehatra midadasika. Manodidina ny 117 tapitrisa ny olon-dehibe amerikana izay manodidina ny antsasaky ny fivondronana no hita ao amin'ny tranokala ao amin'ny rafi-pitantanan-tarehy.
Ny fampiasana tarehy dia fomba mora kokoa hahafantarana olona lavitra, mety anaty horonantsary na amin'ny fotoana tena izy. Mora kokoa ny mametra-tanana amin'ireo mpamantatra biometrika hafa izay mazàna mifandraika aminao mila manatona akaiky kokoa na manana fifandraisana ara-batana sy akaiky azy ireo. Saingy nanakiana ihany koa ny mpitsikera fa tsy azo itokisana ny fanekena ny tarehy satria mety ho antitra ny anton-draharahan'ny tarehy ary mety miova ihany koa noho ny toe-javatra, ny lozam-pifamoivoizana ary ny habetsaky ny vatana izay manova ny fijerin'ny olona iray. Saingy misy ny antony te-hanaiky ny fahazoana azy eran-tany, raha toa ka misy copie misintona anao ary tsy mahalala anao, ny fakantsary vatany izay manana rafitra fankatoavana endrika. Amin'izay dia ho afaka hilaza bebe kokoa momba anao izy ary hampifanaraka anao amin'ny kendrena anao. Ny tranga toa an'ity dia mety ho tena manampy rehefa mijanona ny fikarohana sy fikarohana olona mpanao heloka bevava.
Ahoana no fiasan'ny rafitra fankatoavana vaovao?
Massimiliano Versace izay sendra teratany italiana teraka sy nanangana Neurala -an orinasa mpamorona rindrambaiko AI. Na dia nanao aza ny teknolojia fianarana milina miandry patanty izay manana fanekena sary matanjaka. Amin'ny ankapobeny, ny fanekena ny tarehy dia miasa amin'ny alàlan'ny fianarana milina, izay mampiofana ny solosaina amin'ny alalàn'ny tenany amin'ny alàlan'ny fanomezana azy angon-drakitra sarotra ampidirina ao amin'ny tahiry. Miadana tsikelikely fa amin'ny farany, ilay fakantsary kely eo an-tsorok'ilay polisy dia afaka mamantatra endrika noho ny loko ary avy eo nampiofanina hamantatra ny endrik'olombelona, ​​ary mampifanaraka azy ireo ihany koa amin'ny angon-drakitra misy ny mombamomba azy (anarana angamba). Dingana iray izay miasa amin'ny alàlan'ny fanahafana ny ati-dohan'ny biby mampinono, fa tsy ny fomba fiasan'ny solosaina amin'ny alàlan'ny fangatahana torolàlana hanatanterahana azy. Miasa irery ity takelaka vaovao ity, esory fotsiny ny fakan-tsary ary jereo fa mamaritra ny manodidina azy rehetra izy. Versace dia nitantara ny fizotran'ny fahombiazana, amin'ny ankapobeny dia toy ny antokon-kintana vitsivitsy an'ny mpikirakira izay miasa mavitrika amin'ny faritra samihafa amin'ny ati-doha. Nanazava ihany koa izy fa ireo computations ireo dia azo zaraina bebe kokoa amin'ny hardware izay manodina input tahaka ny ati-doha sy ny hardware izay mandeha tahaka ny dendrites sy ny axons. Nasehon'ny fikarohana nataony fa mianatra betsaka amin'ny tontolo toy izany i AI nefa mampiasa kaody vitsy kokoa. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny habetsaky ny kaody ilaina amin'ny fanekena sary dia mihazakazaka bebe kokoa ianao ary tsy midika izany fa ny solosaina tsy dia matanjaka loatra, izay tsy manana fahefana fanodinana betsaka dia afaka manatanteraka ilay asa nomena ihany koa. Tonga eo amin'ny teboka iray izay ahafahan'ny solosaina mitovy habe amin'ny fakantsary amin'ny vatana mahafantatra ny sary iray izay efa nozarina tamin'ny fakantsary angona mba hijerena ny fakantsary. Avy eo dia mila manao fianarana izy mba hifanaraka amin'ilay lohahevitra amin'ny farany.
Ity farany dia lasa loharanom-bola tsy manam-petra ka afaka mamorona rindranasa vaovao ho an'ny mpampiasa fiarovana ho an'ny daholobe. Andao isika hiheverana miaraka amina raharaha iray raha ohatra ka tsy ampy ny zaza iray ary ny ray aman-dreny dia manapa-kevitra ny hitsidika ilay polisy akaiky eo amin'ny patrol. Ny fakan-tsary mihetsika an'ny vatana eo amin'ilay tompon'andraikitra dia mahita ilay zaza ary mirakitra ny sarin'ilay zaza tsy hita, amin'ny fanaovana an'io maotera AI io dia nianatra ny endrik'ilay zaza. Mampiasa haingana ny motera mba handefasana ny sary amin'ny polisy rehetra amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mipetaka an'ny vatana mba hampiasa ny ramevany amin'ny fahitana ny tontolo iainana. Ny rafi-pitiavana ankehitriny dia ny tsy fahampian'ny fahasamihafana eo amin'ny sary, vokatry ny angonin'izy ireo voaofana. Ireo mpikaroka avy ao amin'ny lab serasera Massachusetts Institute of Technology (MIT) dia nilaza fa ny rafitra telo fantatra momba ny endrika IBM, ny tarehy ++ ary ny Microsoft dia manana toerana ambony kokoa hahitana olona fotsy (99%) mihoatra ny mainty (70%).
Ho famaranana azy dia niharihary ny fakan-tsary amin'ny fahitana azy satria nampiasaina hanamarinana ny fitondran-tena ataon'ny polisy. Tato ho ato izay dia voatsikera fa tsy mitsahatra mandray anjara amin'ny fanaraha-maso marobe ary mety hanaratsy ny toe-javatra any amin'ny toerana iray feno fehezina. Mikasika ny fitsipi-pifehezana kosa dia tapaka amin'ny departemantan'ny polisy ihany koa. Tao Sacramento, nisy mpitandro filaminana sasantsasany nitifitra ny tovolahy iray antsoina hoe Stephen Clark, lehilahy mainty tsy nitam-piadiana voatifitra teo amin'ny tokotanin'ny renibeny. Ny olana toa izao dia nanontany ny mpitsikera ny fomba mahomby ny birao fitsipi-pitondran-tena, mivory indroa isan-taona, izay hanao hetsika hentitra izay hifehezana ny torolàlana orinasa. Betsaka ny manantena fa ny fankatoavana ny tarehy dia ho toa an'i Taser izay nanana ny fandavana voalohany talohan'izay dia nahazo fankatoavana matanjaka eran-tany ho toy ny fitaovam-piadiana ampiasain'ny lalàna lalandava indrindra. Ny lesoka dia tsy maintsy atao ary ny orinasa izay manao io hadisoana io dia ho voasazy fa ny handrosoana miaraka amin'ilay dingana lehibe izay rafitra fankatoavana ny tarehy dia tena ilaina amin'ny fitomboan'ny rafitra fiarovana.
Kamera Vatan'ny polisy dia niandrandra ny fampahafantarana tarehy no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
4752 Total Views 2 Views Today